यस्तो छ आत्महत्या गर्नुको कारण, जुन चाहेर पनि आफूलाई समाल्न सक्दैन ! यस्तो कहिले नगर्नुहोस – च्यालेन्ज नेपाल
यस्तो छ आत्महत्या गर्नुको कारण, जुन चाहेर पनि आफूलाई समाल्न सक्दैन ! यस्तो कहिले नगर्नुहोस
आत्महत्या गर्ने मानिस आफ्नो इच्छा वा शोकले मर्न चाहँदैनन् । मानिस यस्तो व्यवहार गर्न वाध्य हुन्छ । यदि डिप्रेशनमा वा दिमागमा नराम्रा कुरा आएमा साइकियाट्रिस्टको सम्र्पकमा जानु पर्छ । जब मानिसको दिमागमा एक केमिकल्स उत्पन्न हुन्छ तब उसले आफ्नो दिमागलाई वसमा पार्न सक्दैन । जब दिमागमा सेरोटोटिनको मात्रा कम हुन्छ तब मानिसको मनमा आत्महत्याबारे कुरा उत्पन्न हुन्छ ।
डिप्रेशन, नेगेटिविटी, सुसाइड गर्ने विचार जब मानिसको दिमागमा आएमा ब्रेनमा सेरोटोनिनको कमी भयो भन्ने थाहा पाउनु पर्छ । मनोचिकित्साले हाम्रो दिमागमा करोडौ सेल्स हुन्छन् र यी मध्येमा केही त्यस्ता प्रकारका केमिकल्स हुन्छन् ।
सेरोटोनिन पनि एक प्रकारको केमिकल्स हो जो दिमागलाई शान्त र खुशी राख्छ । सेरोटोनिनको कमीले व्यक्तिमा नकरात्मक सोच उत्पन्न भएर आत्महत्या गर्नसम्म पुग्छ । यदि आफ्नो मनमा यस्तो कुरा आउँछ छिटने भन्दा छिटो उपचार गराउनु पर्छ ।
अनावस्यक ग्रुप च्याटबाट आफै हट्ने तरिका सिक्नुहोस
Tags: Challenge nepal challenge online tv च्यालेन्ज अन्लाइन टीभी च्यालेन्ज नेपाल जुन चाहेर पनि आफूलाई समाल्न सक्दैन ! यस्तो कहिले नगर्नुहोस यस्तो छ आत्महत्या गर्नुको कारण
Previous ओछ्यानमा पिसाब फेर्ने समस्या देखिएमा यसो गर्नुस तुरुन्त छोड्ने छ जनचेतनाको लागी भएकोले सबैलाई सेयर गर्नुहोस
Next यौनसम्पर्क गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा हुने १० फाईदाहरु हेर्नुहोस